Shacab Careysan Oo Dabad Qabad Siiyay Saldhiga Ciidamada Kenya. – Bogga Calamada.com
Shacab Careysan Oo Dabad Qabad Siiyay Saldhiga Ciidamada Kenya.
Wararka ka imaanaya deegaanka Husingow ee gobalka Jubbada hoose waxey sheegayaan in gudaha deegaankaasi uu ka dhacay dibad bax xoogan oo ay dhigeen dadka deegaankaasi.
Dibadbaxan ayaa ah mid looga soo horjeeda ciidamada Saliibiyiinta Kenya ee dulaanka ku jooga deegaankaasi iyo maamulka gaala raaca Axmed Madoobe waxeyna dadka deegaanka si aad ah uga caroodeenDhowr oo Qof ka mid ah dadka deegaanka oo maamulka Murtad Axmed Madoobe u gacan galiyay ciidamada Saliibiyiinta Kenya.
Sidoo kale dadka deegaanka Husingow ayaa si kulul uga carooday dhibaatooyin xiriir ah oo mudooyinkii dambe ciidamada Saliibiyiinta Kenya ay u geysanayeen dadka deegaankaasi.
Shacabka deegaanka oo careysan ayaa xoog ku galay saldhiga ciidamada Kenya ay ka sameysteen deegaanka Husingow oo ah deegaan dhaca xad beenaadka gobalka Jubbada hoose uu la wadaago dhulka Kenya xooga ay kaga heysato Somalia.
Dibad baxayaasha careysan ayaa dab qabadsiiyay saldhiga,waxeyna burburiyeen inta badan saldhigaasi,waxeyna tani muujineysaa sida shacabka u necebyihiin shisheeeyaha duulaanka ku jooga qeybo ka mid ah dalka Somalia.